Shaqooyin loogu talogalay qaxootiga iyo soo galootiga | Refugee Center Online | Refugee Center Online
Noqo kaaliyaha ilkaha
xirfadiisa A kaaliye caafimaadka ilkaha waa doorasho wanaagsan haddii aad xiisaynayso in ay caawiyaan dadka iyo daryeelka caafimaadka. Gobol kasta wuxuu leeyahay caddeyn kala duwan ee xilkaan. Akhri wax dheeraad ah
Noqo agaasime aan faa'iido fulinta
Waxaa jira ururo badan oo aan faaiido doonka ahayn ee dunida, oo ay bixiyaan kumanaan shaqo aan faaiido doonka ahayn. Agaasimayaasha Fulinta kormeeraan dhammaan hawlaha, mashaariicda, iyo miisaaniyadda ururka. Akhri wax dheeraad ah
Noqo Tababaraha makhaayad
Iyadoo in ka badan hal milyan oo makhaayadaha ee dalka Mareykanka, uu jiro dalab maamulayaasha makhaayad wanaagsan. warshadaha makhaayad wuxuu u baahan yahay dadka daryeela oo ku saabsan dadka iyo cuntada si ay u maareeyaan makhaayadaha, kuwaas oo. Akhri wax dheeraad ah
Noqo maamulaha mashruuca IT ah
maamulayaasha Mashruuca IT badan yihiin in baahida badan abid. Waxay qaban-qaabiyaan la xiriira kooxda si loo hubiyo in mashaariic aad samayn on time. Akhri wax dheeraad ah
Noqo farsamo ah macluumaadka caafimaadka
farsamo macluumaadka caafimaadka abaabulo oo loo maareeyo xogta caafimaadka. Baro sida loo sameeyo shaqo muhiim ah in la nolosha iyo caafimaadka dadka. Akhri wax dheeraad ah
Noqo xirriirka dugsiga a
xirriirka A dugsiga guriga isku xira dugsiga si waalidiinta iyo ardayda. Tani waa shaqo beer sii kordhaya maxaa yeelay, dugsiyada iyo aad u badan ayaa la ogaaday in isla xiriirinta dugsiga iyo guriga caawiyo caruurta si fiican dugsiga ku samayn. Akhri wax dheeraad ah
Noqo kaabayaasha waxbarasho
Wax kasta oo ku saabsan wax barayay ku xigeenka shaqooyin iyo waxa waajibaadka ku jira. Baro tallaabooyinka aad u baahan tahay in ay qaataan si loo noqdo kaalmada wax bara. Akhri wax dheeraad ah
Noqo turjumaan iyo turjubaan
turjumaanka luqadda A badala erayo lagu hadlo mid ka mid afka luqad kale. Baro oo ku saabsan sida aad u isticmaali kartid farsamooyinkaaga laba luqoodlayaasha ah si ay shaqo ku heli. Akhri wax dheeraad ah
Noqo kaaliyaha barnaamij aan faa'iido-a
Ogow sida ay u noqdaan ku xigeenka barnaamijka urur aan faa'iido doon ah. Akhri wax dheeraad ah
Noqo server makhaayad
server Restaurant yihiin qaar ka mid ah dadka ugu muhiimsan ee makhaayadaha. Baro oo ku saabsan sida si ay u noqdaan server makhaayad. Akhri wax dheeraad ah
Noqo sameeysa ah app mobile
codsiyada Mobile waa qayb caadi ah ee nolosha dadka intooda badan. Ogow sida ay u noqdaan sameeysa codsi mobile. Akhri wax dheeraad ah
Noqo dhismaha ama dayactirka shaqaale
Dream weyn: riyo American | The Refugee Center Onlineriyo American: Waxaa si qarsoodi ah lahayn in ay jiraan qodobo badan oo ka dhigi 50 dalalka of America oo kala duwan ka soo kasta oo kale oo siyaabo badan.
Wareysiyo iyo Working ee Maraykanka: qaxootiga A wadaaga ay waayo-aragnimo